Zvemagariro Suite: Yemagariro Media Management yeMakuru, Akawanda-Mahara Makambani | Martech Zone
Rechida.com yakatanga Zvemagariro Suite, yemagariro enhau manejimendi mhinduro inogadzirirwa yakanangana nemabhizimusi akakura, mazhinji enzvimbo ayo anosanganisa iyo span yese yevatengi yekuita pawebhu, kubva kuongororo dzepamhepo uye kuongororwa kwevatengi kune kuteerera kwenzvimbo uye manejimendi manejimendi.
Makambani makuru anorwira kuita zvine mutsigo kusangana nevatengi munharaunda dzemunharaunda munzvimbo dzenhau venhau. Kupfuurirazve, vezvenhau venhau vanowanzo kuve vega kubva kuongororwa kwevatengi uye online ongororo manejimendi mafomu.
“Chinetso nematurusi enhau aripo ndeekuti hadzina kuvakirwa mabhizinesi. Havagone kukwira kunzvimbo zhinji, uye kazhinji panowanzove nebasa rakaganhurirwa rekudzokorora uye kubvumidzwa. Reputation.com's Social Suite nyowani inopa yakazara uye inogadzikana mhinduro yakagadzirirwa kugadzirisa zvido zvemuno uye zvepakati. Uye ndiyo chete mhinduro inosanganisa vezvenhau, kuongorora kwevatengi uye kuongorora manejimendi muchikuva chimwe chete, zvichipa mabhizinesi nzira yekuvaka nekuchengetedza mukurumbira wakanaka online uye nekukurumidza kukura. " Pascal Bensoussan, Chief Chigadzirwa Officer paReputation.com
Reputation.com's Social Suite inopa yakakwana-yakasanganiswa mhinduro kutora mhinduro yevatengi pamatanho ese pawebhu, kubatsira mabhizinesi kupindura kumanikidza matambudziko uye kuita zvinobudirira nyaya dzisati dzaenda kunetsa. Social Suite inogonesa mabhizinesi ku:
Teerera uye Pindura: Nekutarisa anodarika mamirioni makumi masere emawebhusaiti pamwe nekudyidzana munzvimbo dzakasiyana siyana dzehukama (Facebook, Twitter, Instagram neGoogle +), Social Suite inogonesa mabhizinesi kutora mhinduro nyore nyore, kupindura munguva chaiyo uye kunyatsobatana nenzanga.
Shingairira: Mahofisi makuru uye zvikwata zvemuno zvinokwanisa kushandira pamwe nekushambadzira nezviri nyore kufambiswa kwemabasa kuti vaone kutevedzwa kwechiratidzo uye nemvumo dzinokurumidza, uye kurongedza zvirimo mumakanzuru emuno, enharaunda kana eanofarira.
Publish: Mabhizinesi anogona kukwidziridza kukanganisa kwehukama hwavo nekuburitsa otomatiki panguva dzakatemerwa. Mabhizinesi anokwanisa kutumira zvemuno zvinobata zvemukati kuburikidza neReputation.com's pamberi-inoshamwaridzika nharembozha.
Ongorora uye Rondedzera: Mhinduro yacho inopa inoitika yemushandirapamwe yekutevera nekutevera kubatanidzwa uye kusvika, uchiona iwo mabasa ari kuita mushe ekuwedzera semabhadharo akabhadharwa.
Kuvandudza Chiitiko: Makambani anokwanisa zvirinani kuona zvinhu zvinodzokororwa zvinokanganisa kugutsikana kwevatengi, uye kugadzirisa mashandiro ekuvandudza ruzivo uye kutyaira bhizinesi rinodzokororwa.
Kusiyana nedzimwe mhinduro dzevatengi, Reputation.com inopa sarudzo dzekupa kushambadzira munharaunda kunzvimbo dzakawanda dzechitoro, pakati kubata maneja ese kushambadzira kana kutora nzira yekushambadzira yakasanganiswa. APIs kuFacebook ne Instagram zvinogonesa zvakadzama kushamwaridzana kusangana nekuonekwa. Direct APIs ne Google Bhizinesi Yangu kunatsiridza kuoneka muKutsvaga neMamepu.
Tags: Enterprisefranchisegoogle bhizinesi rangunzvimbo dzakawandamukurumbira.comkuongorora kwevanhukudyidzana kwevanhukutarisana nevanhusocial media ongororokudyidzana kwevanhu venhaukuongorora kwevanhukutsikisa munharaundasocial suite